Sooshiyaal Sikiyuuriti - Xarunta Kheyraadka Gabowga & Naafada (ADRC)
Sharciga Sooshiyaal Sikiyuuriti ee 1935 wuxuu aasaasay shabakad badbaado oo dalka oo dhan ah oo loogu talagalay waayeelka iyo dadka naafada ah. Xeerarka barnaamijyadan waxtarradu way adag yihiin oo way adag yihiin.
ADRC waxay halkaan u joogtaa inay ku caawiso.
Diyaarinta ama Tixgelinta Hawlgabka
Abuur akoon Lambarka Bulshada markasta
Waxaad ku bixinaysaa Lambarka Bulshada inta aad ku jirto noloshaada si ay kuu siiso lacagta hawlgabka. Da'daadu ha ku xirnaato, qof kasta oo shaqeeya waa inuu sameeyaa akoon internet ah. Waa fikrad fiican inaad bilowdo aruurinta macluumaadka waqti dheer kahor intaadan howlgab noqon. Xisaabta Lambarka Bulshada ayaa kuu oggolaaneysa inaad la socoto oo aad xaqiijiso waxa ku soo gala sannadihii aad shaqeyneysay. Waxay kaa caawin doontaa inaad go'aansato inta aad ku darsaneyso qorshaha hawlgabka shirkaddaada, haddii aad mid leedahay, iyo / ama Xisaabaadka Shaqada ee Shakhsiyeed (IRA)
Websaydhka Lambarka Bulshada waa meesha laga sameeyo koontadaada. Markaad hawlgab noqoto, ama haddii aad naafo noqoto, waa meesha lagaa dalbado oo lagu maareeyo dheefahaaga. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad bedesho cinwaankaaga, bilowdo ama bedesho deebaajiga tooska ah, iwm.
Websaydhka Sooshiyaal Sikiyuuriti
Goorma ayaan dalban karaa?
Qof kasta oo jira 62 illaa 70 oo kasbaday dhibco shaqo oo ku filan oo uu xaq ugu yeesho wuu dalban karaa. Da'da aad ku bilaabi karto waxtarrada waa tixgelin muhiim ah maadaama faa'iidooyinka la dhimay haddii la qaato ka hor da'daada "hawlgabka buuxa". Da'da hawlgabnimada buuxda waxay kuxirantahay taariikhda dhalashadaada waxayna noqon kartaa inta udhaxeysa da'da 66 iyo 67. Haddii aadan haysan dhibco shaqo oo kugu filan, ama aad kayartahay xaaskaaga / saygaaga, waxaa suuragal ah inaad ku ururiso dakhliga xaaskaaga / saygaaga. Shaqeynta inta aad qaadaneyso dheefaha sidoo kale waa tixgelin. Way adag tahay oo waa shaqsi. Su'aalo badan ayaa looga jawaabi karaa bogga Sooshiyaal Sikiyuuriti ama la hadal Qorsheeyahaaga Maaliyadeed.
Cusbooneysiinta Amniga Bulshada ee muhiimka ah
Magacaabista Sare ee Wakiilka Lacagta
| Maamulka Lambarka Bulshada (SSA)
U qoondee ilaa iyo seddex shaqsi inay kuugu adeegaan sidii lacag bixiye wakiil kuu ah adiga haddii baahida mar uun soo baxdo.
Aasaaska Naafada Lambarka Bulshada
Markuu Tixgeliyey Codsashada Macaashka Lambarka Bulshada Naafada ah?
Naafada Sooshiyaal Sikiyuuriti way adagtahay go'aanka codsiguna wuxuu noqon karaa mid aad u culus. Waxaa jira waxyaabo muhiim ah oo ay tahay inaad ogaato oo kaa caawin kara go'aankan. Xusuusnow in Lambarka Bulshada uusan oggolaanayn sheegashooyinka dadka naafonimada qayb ahaan ama muddada-gaaban ah. Sharciga federaalku wuxuu u baahan yahay in loo oggolaado naafonimo, xaaladahaaga jireed iyo / ama maskaxeed ayaa kaa horjoogsanaya inaad qabato nooc kasta oo shaqo la taaban karo ah, faa'iido leh ugu yaraan hal sano, ama in xaaladdaadu ay sababi doonto dhimasho. Waxaa jira laba barnaamij oo hoos lagu sharaxay. Qofku wuxuu xaq u yeelan karaa mid ama labadaba barnaamijyadan. In kasta oo shuruudaha aan caafimaadka ahayn ay ka duwan yihiin barnaamij kasta, haddana shuruudaha qiimeynta caafimaadku waa isku mid.
Codsiyada oo dhan waa la socodsiinayaa ugu horeysay xafiiska maxalliga ah.
Maamulka Amniga Bulshada (SSA)
1561 Wadada Dousman, Green Bay
Wac 1-888-862-4811 si aad u codsato taleefan ama ballan xafiiska.
Waxaad sidoo kale ku xareysan kartaa arjiga khadka tooska ah.
Waa maxay Noocyada Faa'iidooyinka La Heli Karo?
Caymiska Naafada Sooshiyaal Sikiyuuriti (SSDI)
Marka la ansixiyo, u-qalmitaanka SSDI waxay ku saleysan tahay "dhibco shaqo" oo lagu kasbaday iyadoo lagu saleynayo taariikhdaada shaqo. Haddii aan lagugu daboolin waxqabadkaaga shaqo, waxaad awoodi kartaa inaad xareysato iyadoo ku saleysan saygaaga dhintay ama waalid dhintay ama howlgab noqday. Ansixinta SSDI waxay ubaahantahay in naafonimadu ay bilaabatay adiga oo wali 'caymis kujiray' SSDI. Xaaladdaada caymiska waxay dhammaan doontaa shan sano ka dib markaad joojiso inaad ka shaqeyso heerar muhiim ah.
SSI waxay siisaa caawimaad lacageed iyo ilaha dadka dakhligoodu yaryahay oo da'doodu tahay 65 ama ka weyn, indhoole, ama naafo ah. Carruurta naafada ah ayaa heli kara SSI, sidoo kale. Si loogu qalmo SSI, qofku waa inuu lahaadaa dakhli iyo hanti ka hooseeya qaddarka sanadlaha ah ee Maamulka Sooshiyaal Sikiyuuriti.
U-doodaha Takhasuska Takhasuska ee ADRC ee Adiga
Khabiirada Gargaarka Naafada waxay la shaqeeyaan shaqsiyaadka 60 sano ka yar oo naafo ah. Khabiirada Gargaarka Naafada ayaa ku caawin kara foomamka la helay ka dib Codsiga hore waxaa lagu gudbiyaa SSA. Waxay awoodi karaan inay kaa caawiyaan gudbinta rafcaanka ka dib diidmada bilowga ah ama go'aanka joojinta ee loo sameeyay qof macaash qaadanayay.
Takhasuslayaasha Faa'iidada waayeelku waxay la shaqeeyaan shakhsiyaad 60 jir ah ama ka weyn. Duruufaha qaarkood, Takhasuslayaasha Gargaarka Waayeelka ayaa kaa caawin kara xereynta arjiga bilowga ah ee gargaarka SSDI. Waxay kaloo kaa caawin karaan waraaqaha ka dib marka arji bilow ah laga xareeyo xafiiska SSA ee deegaanka.
U wac Khabiirka Faa'iidooyinka maanta si aad ugala hadasho xaaladdaada gaarka ah.